एक एकदम साधारण घटना, कुनै पनि व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्छ जो - को खुट्टा मा ऐंठन। यदि cramped खुट्टा, के गर्ने?
पहिले, तपाईंले यो घटना को कारण पत्ता लगाउन गर्नुपर्छ। दौरा शामिल को उपस्थिति पुरानो वा तीव्र थकान कारण हुन सक्छ। कहिलेकाहीं, जब खुट्टा शारीरिक शिक्षा वा खेल कम गर्छ। यो कि को मांसपेशिहरु मा संचित तथ्यलाई द्वारा बताए गर्न सकिन्छ लैक्टिक एसिड। यो आन्दोलन समयमा पीडा ल्याउँछ, र दौरा शामिल हुन सक्छन्। लोड अत्यधिक र unsystematic थिए भने यो हुन्छ। फलस्वरूप, यदि cramped खुट्टा, के गर्ने? प्रयोगले रोक्नुहोस्। आफ्नो खुट्टा सुत्छन्। रोकथाम लागि: आफ्नो व्यायाम सीमित, overreach छैन। समान रूप लोड वितरण गर्न प्रयास गर्नुहोस्। शरीर "अप्रत्याशित" तनाव नदेऊ।
सबै भन्दा साधारण कारण - लामो एक असहज स्थिति रहेको छ। रगत मांसपेशिहरु गर्न प्रवाह गर्दैन, र कम गर्छ। पनि spasm मांसपेशिहरु शक्ति संग जुत्ता कस गर्दा, उदाहरणका लागि, बढ्तै झिकेर कहिले गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, खुट्टा शायद किनभने hypothermia को कम गर्न।
यो घटना बरु अप्रिय छ। cramped खुट्टा भने, एक व्यक्ति सार्न सक्दैन, दुखाइ धेरै महसुस। तर लडाई sudoragami र रोकथाम मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ।
ऐंठन : खुट्टा मांसपेशीमा निकासी लक्षण र रोकथाम
लिन दूर दुखाइ, पीडित मांसपेशी सुत्छन् गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, पेशी खुट्टा सँगै झिकेर यदि यो बिग्रेको माथिको छ। cramped खुट्टा भने, के गर्ने? अगाडि झुक्नुहोस् र तल्ला पुग्न प्रयास गर्नुहोस्। गंभीर दुखाइ - हामी रोक्नु पर्दछ भन्ने चिन्ह मांसपेशीमा stretching। यस मामला मा, मालिश Resort। औंलाहरु पीडादायी क्षेत्र सम्झना। यो पनि यस्तो सुई वा सुई कुनै पनि तेज वस्तुहरु, झुनझुनी मद्दत गर्छ। convulsions supercooling समयमा देखा भने कसरी अप न्यानो गर्न खुट्टा मांसपेशीमा RUB गर्नुपर्छ, र त्यसपछि माथिको विधिहरू गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
रोकथाम को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि - कारणहरू को उन्मूलन। थकित प्राप्त छैन, मांसपेशिहरु overexert छैन। पनि को खुट्टा सहज महसुस हुनेछ जो सहज जूता, लगाउने। शरीर मा म्याग्नेसियम र क्याल्सियम को कमी - त्यहाँ दौरा शामिल को अन्तरनिहित कारण हुन्छन्। म्याग्नेसियम लागूऔषधको फारम बिक्रि छ, यो सँगै क्याल्सियम र भिटामिन पनि डी संग खान, म्याग्नेसियम अखरोट, सूर्यमुखी बीउ, लसुन मा पाइन्छ। एक क्याल्सियम-धनी दूध, पनीर, बादाम।
पनि अक्सर गर्भावस्था दौडान ऐंठन। cramped खुट्टा भने, के गर्ने? अलिकति मांसपेशिहरु काम गर्न, खुट्टा मालिश को दुखेको ठाउँ मा कदम प्रयास गर्नुहोस्। यो भावना निकै कष्टकर हुनेछ किनकी, ढलान र अन्य अभ्यास गर्न छैन राम्रो छ। shuffling वा prophylaxis रूपमा गर्भवती महिला पेबल्स, घोडा खुट्टा रोलिंग पिन मा हिड्ने सिफारिस गरिएको छ। यसलाई आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न आवश्यक पनि छ। सबै पछि, gestation शरीर मा पीडित खनिज ब्यालेन्स संग। स्वस्थ खाद्य पदार्थ, फल, तरकारी, मेवा, खाने शरीर मा deffitsit भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम हटाउन मदत गर्नेछ, र यसरी ऐंठन को छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत।
रक्तचाप को दैनिक अनुगमन: को को नियम
Staphylococcus Aureus घाँटी उपचार
के पीडादायी urination महिलाहरु मा?
एचआईवी विरुद्ध एक टीका। त्यहाँ एचआईभीको लागि एक टीका छ?
मृगौला पत्थर को खण्डीकरणको क्रमलाई: उपचार को विधि
इच्छित लेजर बाल हटाउने - समीक्षा गर्न त स्पष्ट छन्
पूर्वी प्रतिज्ञाहरूमा - एक ... जन्मजात malformations। Valvular हृदय रोग
Squirrels र उडान squirrels बारेमा रोचक तथ्य
योगदान र यसको आकार शेयर
श्रम सुरक्षा: व्यावसायिक सुरक्षा आयोग। एक आयोग जसको संरचना, शक्ति स्थापित गर्न
घरमा calla फूल। हेरविचार र मर्मतका